Puntland iyo Galmudug oo maanta ka shiray xalinta colaadaha beelaha ee miyiga Mudug (Sawirro) – Radio Daljir
Seteembar 21, 2013 9:17 b 0
Galkaacayo, September 21, 2013 – Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ka shiray xalinta collaadaha soo noq noqda ee dhanka miyiga ku dhexmara beelaha ka soo? kala jeeda dhinacyada kala duwan ee gobolkaas, iyadoo inta badan dad reer guuraa ah ay dagaalo ku salaysan arrimaha beelaha dhexmaraan.
Garoonka diyaaradaha ee Galkacayo waxaa maanta ka dhacay kulan ay ka qayb-galeen wasiiro iyo saraakiil ciidan oo ka kala socday labbada dhinac, in kastoo shirku ahaa mid khaas ah oo aan saxaafada joogin, ayaa haddana shir jaraa?id oo kadib shirka la qabtay waxaa lagu sheegay nuxurka wixii laga wada-hadlay.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle iyo wasiirka amniga Galmudug Axmed Maxamuud Xasan (Baasto) ayaa saxaafada kula hadlay shir jaraa?id oo ka dhacay garoonka, waxayna sheegeen in aad loogu gorfeeyey shirkii sidii looga wada-shaqayn lahaa amaanka iyo dhamaynta colaadaha miyiga mudug.
Wasiirada labbada dhinac ayaa sheegay in shirkaan uu muhiim u yahay xiriirka iyo wada-shaqayn labbada dhinac isla markaasna uu gogol xaar u yahay shirar kale oo dhowaan la filayo in ay labbada maamul ka yeeshaan arrimaha gobolka, gaar ahaan xiisada reer guuraaga oo inta badan la isku eedeeyo.
Shirka maanta ka dhacay Galkacayo sidoo kale waxaa heshiis lagu gaaray intii uu socday in la sameeyo guddiyo ka shaqeeya arrimaha nabad-gelyada miyiga iyo gudaha magaalooyinka, iyo in la qabto shirar kale si howshan loo sii xoojiyo.
Miyiga gobolka Mudug ayaa waxaa ka dhaca dilal la xiriira aano qabiil, weerarkii ugu dambeeyeyna waxay geysteen kooxo ka soo jeeda dhanka maamulka Galmudug, kawaas oo miyiga gobolka Mudug ku dilay saddex qof oo ka soo jeeda deeganada Puntland.